Remote zviedza Mazano :
1.Charge chakarurama richava pamusoro apo kuchaja
2.Battery chiedza uye Direction chakarurama pamusoro zvinoreva zviri chokuita
3.BLUE zvinoreva bhatiri zvakakwirira RED zvinoreva bhatiri yakaderera
4.Direction chakarurama kutendeuka DZVUKU kana kunoshandurwa
1. kuisa bhatiri zvakarurama, uye monyorora screws
2.Turn pamusoro Remote rokutanga uye ipapo batidza bhodhi kubatanidza.
3. Push Forward kuti kumhanyisa, Dhonza Back nokuda braking.
4. Skateboard bhatiri zviratidzo, 4 zviedza pamusoro nzira 100%,
3. Lights pamusoro rinoreva 75%, 2 zviedza zvinoreva 50%, 1 chiedza zvinoreva 20% kuruboshwe.
Your Koowheel bhodhi ane simba rakawanda. Tevera Mazano izvi kuitira ngozi pakufamba ruzivo:
Kufambisa bhatani mu increments diki.
Ramba paupamhi pezvaaitsigira pamusoro bhodhi,
Kusanyanya muzinda regiravhiti.
Uchasendamira mberi kana kuwedzera.
Uchasendamira shure kana braking.
GARA kupfeka ngowani.
Find rakavhurika, flat nharaunda pamwe yakachena
Pakarongwa wako chokufambisa wokutanga.
Verenga nyevero pamusoro skateboard uye pakutanga rino.
ZVIMWEWO unodzivirira Equipment zvikuru inokurudzirwa.
Akamurairawo Board uye Change Battery pakiti racho
Light riri mundiro achava RED kana kuchaja, vhura GREEN pashure zvakazara mhosva. Change bhatiri rongedza kana iwe akarayira imwe chete.
Nguva dzose yeuka kuti sungisa yacho screws.
Cherechedza: Kana bhatiri akaisa refu nguva, dzinofanira zvakazara mhosva, uye ipapo kukasawedzerwa kamwe pamwedzi.
1. Ongorora mamiriro mavhiri kuti chokwadi nayo rotates neimwe motokari pachena pamberi Check marori uye mavhiri kuti nechokwadi zvinoriumba vose zvakasimba akasungirirwa.
Regai kuchovha bhodhi kana muchinzwa chero zvemamiriro ruzha kubva vhiri kana motokari mabheyaringi
2. Nguva dzose kuchengetera bhodhi rako rakaoma uye ventilated nzvimbo.
Rambai kure nyorova nguva kudzivisa kukuvadza pcb pamapuranga uye matochi.
3. Asi shandisa Koowheel Charger. Other uncertified ndiro kungaita kuchengeteka nyaya.
Battery vanofanira kugara munzvimbo tembiricha pasi 60Celsius inegumi.
Undoraira bhatiri ose 2-3 mwedzi kana akasiya tsva kwenguva refu kudzivisa zvechigarire.
akamurairawo zvizere bhatiri kwokutanga-nguva kushandiswa iri.
Chengeta ndinorova ezvinhu akaoma uye yakachena, iva nechokwadi chokuti kuchaja pachiteshi pakaoma pamberi mumwe mutariri.
Kuzovasiya bhodhi vasina akavatarisa apo kuchaja
1. Asi shandisa chepakutanga pagondobwe bhodhi kudzivisa matambudziko kwakachengeteka.
2. Wana vanoziva ezvinhu enyika akamedura uye nechokwadi nokuripisa braking chakakwana unongotaura.
3. Oil kuti mabheyaringi kugara
4. Beginners vanofanira kuchovha bhodhi nokungwarira mune mvere pamusoro mugwagwa.
5. Dzivisa nyoro uye pamusoro-nematambudziko mumugwagwa.
User Chinyorwa 1 Charger * 1
AC simba tambo * 1
KUSATSIGIRWA garandi :
Koowheel bhodhi rinosanganisira rimwe gore mugadziri wacho garandi muna USA, makore maviri mugadziri wacho garandi muEurope anofukidza kuremara mu basa uye zvinhu. Izvi hazvirevi kufukidza zvakakanganiswa chibharo, zvisina kukodzera, kuregeredza, tsaona, kana mabhiza mumvura. Battery garandi ndiwo mwedzi mitanhatu.
DZOSE KUDZOKA uye garandi Shipping :
Ndapota rambai yenyu kutumirwa bhokisi. The garandi haibatanidzi kukuvara kubva kutumirwa mu kukwana kavha.
PANGOZI rufu kana kukuvara
Pose iwe kuchovha Koowheel puranga, iwe pangozi rufu kana kukuvara kubva kutadza, kudhumhana, uye anowira. Kuchovha zvakanaka, unofanira kuverenga uye kutevera yambiro zvose uye mirayiridzo iri redzidziso.
Nguva dzose vanopfeka ngowani apo vaifamba. Dzivisa mvura, hukawanika akanyorova, itedze / gogonera hukawanika, makomo, motokari, makatsemuka, makwara, mavhu, matombo, kana zvipingamupinyi kusina aigona kukonzera kurasikirwa traction uye kukonzera kuwa. Dzivisa usiku pakufamba, nzvimbo ine murombo maonero, uye dzezvimwe diki.
YAMBIRO: Regai atasve Koowheel bhodhi munharaunda, musi inongoda, kana dzimwe aimhanya apo iwe haungavi zvakanaka kudzora chinhu unpowered longboard. In zvinoitirwawo Wireless interferenceor bhatiri mhosva, ungafanira kuvimba Skating unyanzvi zvakafanana footbraking kana zvishoma nezvishoma mumatope kuzvirega.
YAMBIRO: DZIVISA MVURA!
Your Koowheel bhodhi haisi mvura uchapupu. Elec- tronics, mabheyaringi, uye zvimwe zvinoriumba zvinogona sousingabatsiri. Kukuvara mvura haina akafukidza pasi garandi.
YAMBIRO: nzwara PFUNGWA!
Chengeta minwe, bvudzi, uye zvipfeko kure nemabhandi, Motors, mavhiri, uye zvose zvinofamba zvikamu
YAMBIRO: PANGOZI OF Kugwinhwa Nemagetsi!
Regai kuvhura kana tamper pamwe zvemagetsi housings, iyo voids ari garandi.
UCHIRI KOOWHEEL: Tapota atasve musoro uye kuremekedza avo vakakukomberedza, zvose nokuda kwenyu vakachengeteka uye kubatsira kusimudzira mutambo uye kwadzinoita zvokufambisa redu idzva.